I-China 16oz 500ml I-Amber Glass yeBoston Ibhotile enomzi-mveliso weMpompo oMnyama kunye nabaxhasi | IHoyer
I-16oz 500ml i-Amber Glass yeBoston ibhotile enepampu emnyama
UKULUNGA / kwi-OFF- Le mpompo iqulathe i-ON / OFF switch, ungayiguqula ibe kwimeko ye-OFF xa ungasebenzisi, onokuthintela ukuvuza kwamanzi ngokungasebenzi kunye nokugcina ulwelo lulucoceke ngokwaneleyo. Kukwalungele kakhulu ukuyiyisa kwezinye iindawo.
Umthamo: 500ml / 16 oz
Ubunzima: 255g / 0.56 pound
Ukuphakama: 168mm / 6,6 intshi
Ububanzi: I-75mm / 2.95 intshi
Inzuzo: Umgangatho ophezulu, onako ukuphinda uzalise, ukukhusela i-UV, uzinze.
I-LEAK-ProOF-Ibhotile inokusebenzisa isiciko seBakelite ukutywina ulwelo ukuba ufuna ukugcina ulwelo kangangexesha elithile. Kukho ukufakwa kweplastiki ngaphakathi kulunga ngentambo yebhotile ngokugqibeleleyo kwaye kungathintela ukuvuza ngokumangalisayo. Yiba namava nje, uyakufumanisa ukuba yeyona nto uyilindeleyo.
Ukuphalaza okungalunganga-Impompo intle kakhulu ukubamba ngendlela ye-ergonomics kwaye amandla okutshiza awamanzi aqaqambe kakhulu.
Umbala we-Amber-Iimveliso zeglasi yeAmber zinokugcina ulwelo kangangexesha elide kuba zinokuthintela ukonakaliswa ngokukhuseleka kwe-UV. Ikwanokukhusela impilo yakho kakuhle kwizinto ezikhoyo ze-eco-friendly kunye nezixhobo zeglasi yokutya.
Ukusetyenziswa okuninzi- Olu seto lwebhotile lunokusetyenziswa kwindawo ebanzi, enje negadi, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlambela njl.
Qaphela: Nceda ugcine abantwana bengaphantsi kweminyaka emi-6 ubudala okanye ugcine ukutshintshwa kwempompo kwindawo engu-OFF xa kukho ioyile ngaphakathi.
Ubungakanani Umthamo: 500 ml Ubunzima: 255 g Ubude: 168 mm ububanzi: 75 mm Intamo: 28 / 400mm Umthamo: Ubunzima be-16oz: i-0.56 yeepawundi Ukuphakama: I-6.6 intshi ububanzi: 2.95 intshi
Umbala i-amber Ukuprinta okanye eminye imibala (ecacileyo, eluhlaza, neblue) yamkelekile
Umzekelo a. iisampulu esitokhweni:QTY: 1-5pcsIindleko: zinikezwe ngokukhululekileyoIzinto zokuhamba: qokelela
b. iisampuli ezenziwe ngokwezifiso:QTY: ngokwemfuno yakho Ixabiso: ngokwendlela ethile yoyilo kunye nemvelisoIzinto zokuhamba: qokelela
Edlulileyo: I-4oz 120ml Amber Glass yeBoston ibhotile enesitshizi
Okulandelayo: I-30ml (1oz) I-Amber Glass Boston Bottle eneDropper Iseti- yeoyile efunekayo, i-Perfume okanye iziqholo
I-amber boston ibhotile
Ibhotile ye-boston iyonke
ibhotile ejikeleze ibhotile
Iintambo zeRed Famm Reed ezimiswe ngokwezixhobo ...